Ibe ya bụrụ - OUZHAN ahia (SHANGHAI) CO., LTD
Ouzhan nkenke ibe ya bụrụ Service-China Cheap ibe ya bụrụ Parts Manufacturer
Dị ka ihe ndị magburu onwe ọnụ machining factory, OuZhan nwere otutu ego maka ibe ya bụrụ na-emepụta na a elu nke imekọ ihe ọnụ. A esorowo akụkụ mgbe mkpa a ga-esorowo na elu okpomọkụ na-etolite a oghere, wee mesịa zigara anyị machining factory nke ikpeazụ nhazi. Ya mere, dị ka onye nrụpụta siri ike nke nwere ọtụtụ iri afọ nke ahụmịhe na ụlọ ọrụ nhazi igwe, ọ bụghị naanị na anyị maara usoro dị iche iche nke ịmecha, mana anyị nwekwara nghọta dị mma banyere njikọ mmepụta dị iche iche na usoro teknụzụ nke ụlọ ọrụ anyị dị ala, nke ahụ bụ , ibe ya bụrụ akụkụ mepụtara.
Yabụ mgbe ịchọrọ ọrụ ịgbagha, ị nwere ike ịchọ ụlọ ọrụ na-eme mkpọtụ ozugbo, mana nhọrọ ka mma bụ ịchọta ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nhazi usoro. Naanị ị ga-ezitere ha eserese ngwaahịa gị, ha ga - enyere gị aka ịchọta ụlọ ọrụ na - arụ ọrụ dị mma, jiri ahụmịhe ha nwere iji hazie usoro nhazi na usoro niile maka gị. Ihe ị ga - eme bụ ichere maka ịnyefe ngwaahịa a mechara, kama ịchọ ụlọ ọrụ na - eme ihe na - arụ ọrụ, nke ga - azọpụta gị oge na ume dị ukwuu.
Ouzhan nkenke ịkụ ikike na atụmatụ:
Ihe obula onodu a di, na eme ihe kachasi elu ma na onodu n’onodu obula n’eme ka ogo anyi di nma bu ogwugwu ulo kacha mkpa nke Ouzhan.
• Ebe ọ bụ na ndị ahịa anyị amachaghị mgbaghara, mgbe anyị natara eserese ha, anyị chọpụtara na imewe ahụ agaghị ekwe omume ịgbaghara, ndị otu injinia anyị ga-ewezigharị akụkụ ahụ na teknụzụ anyị. Ọnọdụ ọzọ dabara adaba bụ na ndị ahịa enweghị ike iji CAD see ngwaahịa, mana jiri aka bipụta ha, na-enweghị nnabata, naanị ụfọdụ isi. N'okwu a, anyị ga-enyekwa ọrụaka ọrụaka ọkachamara na-eji akara nnabata.
• akpụzi development.A ụzọ nke elu àgwà ibe ya bụrụ ebu bụ premise nke na-amị elu àgwà ibe ya bụrụ akụkụ.One nke anyị doro anya uru bụ na anyị nwere onwe anyị ngwá ọrụ na-anwụ anwụ shop na niile ibe ya bụrụ na e mere na-arụpụtara site onwe anyị.
• Emechiela anwụrụ ibe ya. Anyị na onye òtù ọlụlụ ụlọ ọrụ ibe ya bụrụ usoro mechiri emechi-anwụ anwụ, ya mere, anyị na-agba mbọ na-amị obere nchara na-agbaghara na aluminom forgings. N'iji ígwè obibi 300 si na 2500 ruo 2500, anyị nwere ike ịnye mgbaghara nke 0.2kg-50kg.
• Oge nkenke. Oge ụfọdụ, ịgbaghara enweghị ike iru oke ma ọ bụ nnabata nke akụkụ ikpeazụ. Na nke a, anyị ga-edebe ụfọdụ nnabata mgbe ibe ya bụrụ, wee rụọ nkenke machining. Ọrụ nhazi dị otú ahụ ga-enye ndị ahịa anyị akụkụ ndị ziri ezi karị.
• Okpomọkụ na ọgwụgwọ ala. Iji meziwanye ihe nke ngwaahịa, dị ka ike, a ga-eme ọgwụgwọ okpomọkụ mgbe ọ gbasịrị. Companylọ ọrụ anyị nwere ike ịnye ọrụ ọgwụgwọ ọ bụla na ịrịọ arịrịọ.Anyị nwekwara ike ịnye ọrụ nlekọta ọgwụgwọ dị iche iche, dị ka eserese, galvanizing, wdg.
• Nnwale na-enweghị mbibi. Maka agbaghara ọ bụla, anyị ga-eduzi ule na-enweghị mbibi tupu nnyefe iji hụ na ngwaahịa dị mma.
• Ọrụ nchịkọta nkwakọ ngwaahịa. Anyị nwere ike ịnye ọrụ nkwakọ ngwaahịa ahaziri iche, naanị ị ga-enye anyị ozi nkwakọ ngwaahịa achọrọ.
Ihe mere ị ga-eji họrọ Ouzhan Forging Services
1. Afọ nke ịkpụzi ahụmahụ
Ouzhan abụrụla ọkachamara na CNC machining ruo ọtụtụ iri afọ, anyị nọ n'ọnọdụ dị mma iji kwado ụlọ ọrụ na-eme mkpọtụ na anyị maara nke ọma usoro na usoro dị iche iche dị iche iche.
2. Otutu CNC n'ichepụta ikike
Ouzhan bụ ọkachamara na ntụgharị, igwe, lathing, mkpọpu ala, ọrụ CNC na ọrụ ndegharị, yabụ ị nwere ike ịnweta nnukwu nhọrọ nke ọrụ ịkọwapụta ziri ezi maka akụkụ ndị ị na-atụghị anya site na ndị otu anyị tụkwasịrị obi.
3. Ike R & D ike
Anyị nwere ndị injinia 10 na ụlọ ọrụ R&D anyị, ha niile bụ ndị dọkịta ma ọ bụ ndị prọfesọ si Mahadum Sayensị na Teknụzụ nke China. Anyị nwere ike ịnye ọrụ ọkachamara kachasị na ọrụ ịkpụzi.
4. Mkpụrụ siri ike njikwa (ISO 9001: 2008)
Anyị nwere ọkachamara àgwà nnyocha pesonel na equipments, dị ka mba ụkpụrụ gị ngwaahịa nwalee, na inye a zuru ezu ule akụkọ maka ahịa 'ibe ya bụrụ akụkụ.
5. OEM & ODM Na-anabata
Ahaziri nha na shapes dị. Mmadụ Bịa na-eso gị 2D ma ọ bụ 3D Eserese nke gị ibe ya bụrụ akụkụ na anyị, ka na-arụ ọrụ ọnụ na-eme ka ndụ ihe okike.
Ihe na-arụ ọrụ na etu esi arụ ọrụ
Na usoro ịkpụzi, a na-akpụ igwe site na ịpị, ịkụ aka, ma ọ bụ ịpụta site na nrụgide dị elu iji mepụta akụkụ a na-akpọ mgbaghara. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọla ọ bụla nwere ike ịbụ nke a kpụrụ, gụnyere carbon, alloys na steel nchara, aluminom, titanium, ọla, ọla kọpa, wdg. E nwere ọtụtụ dị iche iche nke ibe ya bụrụ usoro, gụnyere oyi ibe ya bụrụ ma ọ bụ isi ibe ya bụrụ, anwụ (mechiri emechi anwụ) ibe ya bụrụ, oghe anwụrụ ibe ya na enweghị nkebi Rolling mgbanaka ibe ya bụrụ. Ofdị ụdị ibe nke ahọpụtara ahọpụtara dabere na ọla a ga-arụ na ụdị, ogo na ihe eji arụ ọrụ ikpeazụ.
Na oyi na-atụ, a na-eme ka ígwè a na-edozi ahụ ghara iwe ọkụ. Kama, enwere ya n'okpuru oke nrụgide. Usoro a na-eme ka nha ngwaahịa ahụ bụrụ nke ziri ezi na ọdịdị ikpeazụ. A na-ejikarị ya emepụta obere akụkụ dịka ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na ike achọrọ ịkpụzi igwe dị oke, ebe ọ bụ na a chọghị ikpo oku, ike niile achọrọ iji mepụta ihe site na iji usoro a dị obere. Ihe ederede nke usoro a kwadebere na-enwekarị ike n'ihi na kpo oku anaghị eme ka ike gwụ ike nke igwe ahụ.
Mmetụta na-anwụ anwụ bụ ihe a na-ejikarị arụ ọrụ. Ke anwụ ibe ya bụrụ, a metal workpiece-etinye n'etiti abụọ nwụrụ. Ka ebu ahụ na-eru nso, ihe nrụpụta ahụ ga-enwe nrụrụ plastik ruo mgbe akụkụ ya sara mbara na-emetụ n'akụkụ akụkụ nke ebu ahụ. Na usoro a, n'ihi na ụfọdụ ọla a wụrụ awụ na-arụ ọrụ na mpụga nke ntinye ebu, a na-agbanye ọkụ. Mgbe flash jụrụ, ọ na-enye workpiece iguzogide deformation, si otú ime ike nke ikpeazụ ngwaahịa. Nke a na - ebute nrụgide n'ime ọtụtụ akụkụ ma na - enyere aka na - abanye n'ime afọ ojuju.
Na-emeghe anwụrụ ibe ya, ọnwu anaghị ekpuchi ekpuchi ọrụ ahụ. Kama nke ahụ, enwere oghere ụfọdụ na-eme ka akụkụ niile nke ihe a na-eme ka ọ pụọ na kọntaktị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na mpaghara oghere dị jụụ. N'ime oge a na - emeghe ịnwụ anwụ, a na - ewepụta ihe ndị na - arụ ọrụ ọla karịa igwe ọkụ ọkụ ya, mgbe ahụ usoro ị ga - amalite. N'ime usoro ahụ dum, ihe a na-arụ ọrụ na-akwali ka akụkụ niile nke workpiece ahụ wee bụrụ nke a ghagidere. Ka ihe eji arụ ọrụ ahụ na-agagharị ma na-ebigharị, akụkụ ndị dị na mpaghara mmeghe ga-ajụkwa n'okpuru ebe a na-edegharịghachi ọla ahụ, wee kpoo ọkụ ka ihe ahụ na-aga n'ihu.
Rollgbagharị mgbagharị na-agụnye ikpo ọkụ ihe na-eme ka ihe na-eme ka okpomọkụ sie ike. Mgbe ahụ, a na-etinye preform na igwe na-agagharị n'ime. Mgbe etinyere nrụgide na mgbidi nke calender ahụ, preform na-amalite iwere ụdị cylindrical ma ọ bụ annular. Dika akụkụ nke ime na mpụga na-agbasawanye na ọrụ ndị a na-arụ ọrụ, mpaghara obe ga-ebelata.
Ihe eji eme ihe - ihe eji eme ihe
Amamịghe ihe na-adịghị mma n'ihi na ibe ya bụrụ. Ngwongwo nwere ezigbo plastik na mpaghara plastik buru ibu dị mma maka ịkpụpụta, dị ka carbon steel, alloy steel, na ụfọdụ ọla na-abụghị nke efere dị ka ọla kọpa, aluminom, na alloys magnesium.
Ọgba tum tum
Onye na-enyocha mbara igwe
Valve & ọkpọkọ
Ouzhan Forging Mkpa Emechara
Nke a bụ nhọrọ dị iche iche nke ọrụ ọlachachachachachacha nke ahọruru na nhọrọ ị họọrọ maka akụkụ ndị a gbanwere akụkụ CNC iji melite akụkụ ahụ, ịdị nro dị elu, nguzogide corrosion, na njirimara ndị ọzọ:
① Dị ka igwe (ọkọlọtọ): ~ 125 RA µin (3.2 RA µm). A ga-ahụ akara ngosi ngwá ọrụ pere mpe na akụkụ ahụ.
Mo Kpochapụrụ: A na-arụzi akụkụ dị iche iche na obere ọnụego iji nweta ihu igwe nke ~ 62.5 RA µin (1.6 RA µm). Enwere ike ibelata ihu ala ruo ~ 32 RA µin (0.8RAµm) mgbe ị rịọrọ.
Bead Blasted: Bead ọgbụgba ọkụ na-agbakwụnye a edo matte ma ọ bụ satin elu imecha na a machined akụkụ, wepụ niile ngwá ọrụ akara. Tumadi eji maka aesthetic nzube.
Anodized Clear ma ọ bụ Agba: Anodizing na-agbakwunye ihe mkpuchi seramiiki dị mkpa, nke siri ike, nke na-enweghị ntụpọ n'elu akụkụ aluminom, na-eme ka nsị ha na-ada ma na-eyi nguzogide. A na-enweta ya na agba dị iche iche.
Hard Anodized Hardcoat: Hardcoat anodizing na-arụpụta mkpuchi mkpuchi seramier na-enye akwa corrosion na-eyi nguzogide. maka ngwa ọrụ.
A-Powder Coated: Powder Coated: Powder mkpuchi na-agbakwunye obere akwa nke siri ike, na-eyi na corrosion na-eguzogide ọgwụ polymer agba n'elu akụkụ. Dị na nnukwu agba.
Electropolished: Electropolishing bụ usoro elektrọnik eji arụ ọrụ na-etechasị akụkụ, passivate na deburr metal. Ọ bara uru iji belata ihu igwe.
Ox Black oxide: Black oxide bụ mkpuchi ntụgharị nke eji emeziwanye nkwụsị nke corrosion ma belata ntụgharị uche ọkụ.
Ihe mkpuchi chromate (Alodine / Chemfilm): A na-eji mkpuchi chromate mee ka ihe na-emebi ihe nke metal alloys ma na-ejigide ihe omume ha.
⑩ Nchapu: A na-ehichapu ahịhịa site na ịchacha ọla ahụ na nkụkọ nke na-akpata nsị satin na-enweghị atụ.